MTV | Myanmar Mp3 Album
Sone Phyo (feat. Tay Za MC) – ဘယ်လောက်ဝေးဝေး [Single]
Download Sone Phyo (feat. Tay Za MC) – ဘယ်လောက်ဝေးဝေး [MP3] Sone Phyo (feat. Tay Za MC) – ဘယ်လောက်ဝေးဝေး [M/V] Download Sone Phyo (feat. Tay Za MC) – ဘယ်လောက်ဝေးဝေး [MP4]
May 6, 2013 MMA MTV Myanmar Artist Myanmar MTV Leaveacomment
ရဲမင်း(Y Melody) – အစိမ်းရောင်ကမ္ဘာ တမ်းချင်း
\_ Download Mp4… Mediafire Download and Listen Mp3 … Soundcloud You Tube Link
April 10, 2013 Juni အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀ါသနာရှင် အခွေများ MTV Myanmar Artist Myanmar MTV Myanmar MTV Myanmar Underground ရဲမင်း Leaveacomment
Download MP4 ၀၁။ အားလုံးလာ ၀၂။ ကြမ်းလှချည်လား ၀၃။ သိကြားမင်းကြီးမပြန်နဲ့ဦး ၀၄။ မစ္စတာပွဲတိုင်းကျော် ၀၅။ မောင် မောင် မောင် ၀၆။ ဒီနှစ်တော့ခွှင့်လွတ် ၀၇။ လာပါ ၀၈။ ကားဆရာလေးသိပ်နှေးတယ် ၀၉။ စိတ်မကောင်းဘူးအချစ်ရယ် ၁၀။ တော်ပြီ တော်ပြီ ၁၁။ ကြမ်းလှချည်လား ဖြူဖြူနှင့်ကြယ်ပွင့်ကလေးများ [Album] MP3 Here!
March 29, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) ဖြူဖြူကျော်သိန်း ပြည့်မှူးသဒ္ဒါ မေသက်ထားဆွေ MTV Myanmar Artist Myanmar MTV New Myanmar Albums Leaveacomment
Yummy Rookie – အဖြူရောင် DVD
June 16, 2012 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) MTV Myanmar Artist Myanmar MTV Myanmar MTV New Myanmar Albums Leaveacomment
ခမ်းခမ်းနားနား၂၅ ( VCD LIVE SHOW)
1.တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုလျှော့- ဂျောက်ဂျက် Vs ကျော်ထွဋ်ဆွေ 2.မယုံချင်လို့ – ချမ်းချမ်း 3.အဖြေပေးတော့ – သားကြီး 4.မင်းအလိုကျ – သြရသ 5.ကြောက်တယ် – သံသာဝင်း,အနဂ္ဂ 6.ကိုကိုသိသွားမှာ – အိမ့်ချစ် 7.အဝေး – ရဲလေး 8.ဆိုးတူကောင်းဖက် – ထိန်ဝင်း Vs ပန်နီး 9. buy cheap propecia no prescription ပလွေရိုး – ကျော်ထွဋ်ဆွေ 10.နားမလည်တဲ့မျက်ဝန်း – သြရသ Vs ဟန်နလာ 11.ခေါက်ထားလိုက – စန္ဒိမြင့်လွင့် 12.ချစ်ခြင်း နဲ့ ချက်ချင်း – Too Big 13.ကိုယ်တိုင်ရေးဇာတ်လမ်း – N ကိုင်ရာ 14.ကိုယ်မပျော်ဘူး … Continue Reading →
May 14, 2012 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) MTV Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment